Indostrian'ny fizahantany ao Sodana: Ny filoha ATB St. Ange dia maniry ny hijoro eo akaikin'i Sudan i Afrika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Indostrian'ny fizahantany ao Sodana: Ny filoha ATB St. Ange dia maniry ny hijoro eo akaikin'i Sudan i Afrika
Sambany mankafy ny fahalalahana ny olona ao Sodana. Tsy ho afaka hiverina intsony ary ny fizahantany dia fomba iray hanarenana ny fahatokisan-tena sy ny toekaren'ity firenena lehibe ity amin'ny farany.
Birao fizahantany afrikanina Ny filoham-pirenena (ATB) Alain St. Ange dia nanara-maso ny zava-mitranga ao Sodana.
Hoy izy: "Ny toe-javatra iainan'i Sudan dia mila an'i Afrika amin'ny ankapobeny mba hahatakatra ny olana atrehan'izy ireo ary ho eo anilan'izy ireo.
Ny fiovan'ny governemanta any Sodana izao dia mila miroso amin'ny dingana fanarenana ary ahafahan'ny mpilalao indostrian'ny fizahantany miangona sy mametraka ny toekarena eo amin'ny lalam-panamafisana.
Ny USP (teboka fivarotana tsy manam-paharoa) any Sudan dia tadiavina tokoa. Ny piramidan'izy ireo dia sasany amin'ireo lehibe indrindra eto an-tany ary ny tontolony anaty rano ao amin'ny Ranomasina Mena dia mijanona ho vatosoa tena izy.
Ny mpikambana amin'ny indostrian'ny fizahantany ao Sodana dia asaina hanatevin-daharana ny Birao fizahantany afrikanina tsy misy sarany. Ny birao fizahantany afrikanina dia manolo-tena ho eo anilan'izy ireo hatrany.
Amin'izao fotoana izao dia misy mpikambana efatra avy any Sodana voasoratra ao amin'ny ATB Directory
Mandritra izany fotoana izany, ny talen'ny Vondrona Afrikanina dia nanome ny filankevitry ny tetezamita Sudan mandritra ny telo volana hanatanterahana ny famindram-pahefana amin'ny fitsipiky ny sivily izay nanamafy fa tsy tokony hitarina io fanemorana io.
Ny fivoriana natolotry ny egyptiana Abdel Fattah al-Sisi izay sady filohan'ny Vondrona Afrikanina ao Kairo izay natrehan'ny mpitarika Chad, Djibouti, Somalia, Afrika Atsimo, ny praiminisitra lefitra ao Ethiopia, lehiben'ny vaomiera Union Union, minisitry ny raharaham-bahiny ary iraky ny filoham-pirenena any Kenya, Nizeria, Sudan atsimo ary Oganda.
Ny fivoriana dia natao tao ambadiky ny fahatarana roa herinandro nomen'ny Peace and Security an'ny Vondron'olona Afrikanina mba hanomezana fahefana ny fitondrana sivily.
Ny fivoriana fakan-kevitra dia notantarain'ny filohan'i Moussa Faki avy ao amin'ny kaomisiona AU ary nanao fitsidihana roa andro tao Khartoum handinihana ny zava-misy ary nihaona tamin'ireo mpiara-miasa Sodaney.
"Neken'ny firenena mpandray anjara fa ilaina ny manome fotoana bebe kokoa amin'ny manampahefana Sodaney sy ny antoko Sodaney hanatanterahana ireo fepetra ireo, amin'ny fiheverana fa tsy ho lava izy ireo, ary nanoro hevitra ny filankevitra momba ny fandriam-pahalemana afrikanina sy ny filaminana hanome ny fandaharam-potoana nomena ny fahefana mandritra ny telo volana ”, hoy ny fanazavana.
Taorian'ny fivoriana natao tamin'ny filankevitry ny tafika ny sabotsy lasa teo, nanapa-kevitra ny hery Freedom and Change fa hampiato ny fifampiresahana amin'ny miaramila miampanga azy ireo ho miasa mamerina ny fitondran'ny filoha Omer al-Bashir ary mandà tsy hanaiky ny maha-ara-dalàna ny revolisionera azy ireo.
Ny filohan'ny komity politika TMC Omer Zain al-Din izay nifampiraharaha tamin'ny herin'ny mpanohitra ho azy dia nilaza fa tsy misy afa-tsy ny fananganana governemanta feno hisolo tena ny sehatra politika iray manontolo.
Nanamafy ny fihaonana fa ny manampahefana Sodaney sy ny hery politika dia tokony hiara-hiasa am-pinoana mba hiatrika ny zava-misy any Sodana ankehitriny ary hanafainganana ny fananganana fitondrana lalàm-panorenana.
Ity fifanakalozan-kevitra ara-politika demaokratika ity dia tokony ho tompon'andraikitra ary hotarihin'i Sodaney tenany, "ao anatin'izany ny antoko Sodaney rehetra ao anatin'izany ny hetsika mitam-piadiana," dia nanamafy hatrany ny fanambarana.
Nilaza ny vondrona mpanohitra Sodaney fa hanetsika ny arabe izy ireo hanery ny miaramila hamaly tanteraka ny fitakian'izy ireo.
Saingy misy ny sasany manondro ny filàna ny fanesorana ireo jeneraly Islamista ao amin'ny filankevitry ny tafika ho toy ny fepetra hifanarahana amin'ny tafika Sodaney amin'ny fananganana andrim-panjakan'ny tetezamita.
Ny FAA dia manome mari-pankasitrahana voalohany an'ny orinasan-tseranana ho an'ny orinasan-drone fandefasana drone
$ 3.6 miliara fanamboarana ny seranam-piaramanidina sy trano fandraisam-bahiny fivoriambe vaovao any Salt Lake
20 minitra lasa izay